रामदेवलाई प्रधानमन्त्रीले भने- तपाई ढुक्क हुनुस जग्गाको व्यवस्था म मिलाउँछु ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
रामदेवलाई प्रधानमन्त्रीले भने- तपाई ढुक्क हुनुस जग्गाको व्यवस्था म मिलाउँछु !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पतञ्जलिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
काठमाडौँमा शुक्रबार पतञ्जलि योगपीठ नेपाल मण्डिखाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पतञ्जलिलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै जग्गा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
‘नेपाल सरकार पूरा सहयोग गर्न तयार छ । यो नन प्रोफिट संस्थालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ’, देउवाले भने ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुभएको छ ।